दसैंमा तेलको मुल्य दोब्बर ! | Sagun Post
दसैंमा तेलको मुल्य दोब्बर !
कोरोना सुरू भएदेखि नै उपभोक्ता बजार मूल्य आकासिएको छ। यसमध्ये सबभन्दा बढी चर्चा भएको खाने तेलको मूल्यको हो। पछिल्लो डेढ वर्षमा तेलको भाउ निरन्तर बढ्दै झन्डै दोब्बर भइसकेको छ।
२०७६ पुसदेखि तेलको मूल्य थोरैथोरै बढ्न थालेको हो। सुरूमा लिटरमा ५-१० रूपैयाँ बढ्दा उपभोक्ता र अनुगमन गर्ने निकाय दुवैले वास्ता गरेनन्। जब २०७७ भदौ–असोजसम्म असामान्य तरिकाले उकालो लाग्यो तब मात्र अनुगमन निकायको ध्यान गयो।
त्यो बेला दसैं–तिहार छेको परेकाले भाउ बढेको र विस्तारै कम हुने अनुमान सरकारले गर्‍यो। तर सरकारको अनुमान फेल हुँदै तेलको भाउ दोब्बर बढी भयो।
नेपाली बजारमा खाने तेल विशेषगरी तीन प्रकारका आउँछन्ः भटमास, सूर्यमुखी र तोरी। यी तीनै किसिमका तेलका भिन्नभिन्न ब्रान्ड छन्। ब्रान्डअनुसार फरक मूल्य छ। हामीले यहाँ प्याकेटमा पाइने सामान्य तेलको भाउलाई आधार मानेर चर्चा गरेका छौं।
सुरू गरौं २०७६ असोज/कात्तिकदेखि, अर्थात् दसैंताकादेखि।
खुद्रा व्यापार संघका अनुसार त्यो बेला भुटेको तोरी तेलको मूल्य प्रतिलिटर दुई सय ७० रूपैयाँ थियो। काँचोको एक सय ७५ थियो भने सूर्यमुखी एक सय ५० र भटमासको एक सय ४० थियो।
त्यसपछि पुस-माघ महिनामा भटमास र सूर्यमुखीको भाउ बढ्यो। फागुनमा काँचो तोरीको तेलको मूल्य केही घटेको थियो भने अन्यको स्थिर रह्यो।
२०७६ चैतमा पलकडाउनपछि भने तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेको संघको तथ्यांकले देखाउँछ।
चैतमा भुटेको तोरी तेल प्रतिलिटर तीन सय, काँचो दुई सय, भटमास दुई सय २० र सूर्यमुखी दुई सय २५ रूपैयाँ पुगेको छ।
२०७७ साल वैशाखदेखि भने भाउ अलि कम हुन थाल्यो। असारदेखि भुटेको तोरी तेल लिटरको दुई सय ७५, काँचो एक सय ८०, भटमास एक सय ५० र सूर्यमुखी १ सय ६४ रूपैयाँ भयो।
संघका अनुसार दसैं-तिहारमा तेल यही भाउमा कारोबार भयो।
चाडवाड सकिएपछि मूल्य कम हुने अनुमान भए पनि मंसिरमा फेरि बढ्यो। यसरी थोरै कम हुँदै, धेरै बढ्दै तेलको भाउ उकालोतिरै लागिरह्यो।
यस वर्ष असोज १ गतेसम्म आइपुग्दा भुटेको तोरी तेल मूल्य प्रतिलिटर तीन सय ६०, काँचो दुई सय ६०, भटमास दुई सय ४० र सूर्यमुखी दुई सय ५० रूपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको थियो।
यसरी हेर्दा डेढ वर्षमा तेलको मूल्य झन्डै दोब्बर भइसकेको छ।
बजारमा आजभोलि भने भुटेको तोरी तेल लिटरको तीन सय, काँचो दुई सय ५०, भटमास दुई सय ३० र सूर्यमुखी दुई सय ४५ रूपैयाँ रहेको खुद्रा व्यवसायी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आपूर्ति समितिका सदस्य चन्द्र थापाले जानकारी दिए।
चाडवाडको समयमा तेलमा निकै खर्च हुन्छ। त्यसैले यस वर्ष उपभोक्ताले तेलमा झन्डै दोब्बर बढी खर्चिनु पर्ने देखिएको छ।
गत वर्षभन्दा यसपालि लिटरमै सय रूपैयाँसम्म महँगो पर्नेछ। मानौं तपाईंलाई दसैंमा पाँच लिटर सूर्यमुखी तेल चाहिन्छ। अघिल्ला दसैंमा यति तेल किन्न सात सय ५० हाराहारीले पुग्थ्यो भने यसपालि करिब १३ सय तिर्नुपर्नेछ।
चेम्बर अफ कमर्सका आपूर्ति समिति सदस्य थापा अत्यावश्यक तेलमा उद्योगीले यसरी मूल्य बढाउन नहुने बताउँछन्।
‘तेल कति धेरै महँगो भएको त भन्छन् ग्राहकले। तर के गर्नु नभइ नहुने कुरा हो। महँगै भए पनि लैजान्छन्,’ उनले भने।
तेलको मूल्य धेरै बढेपछि ग्राहकको स्वभावमा भने केही परिवर्तन आएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पहिले एकैपटक धेरै तेल लैजाने ग्राहकले अहिले आवश्यकता अनुसार एक/दुई लिटर मात्रै लैजान्छन्।
तेलको मूल्य किन बढ्यो त यसरी ?
नेपालमा वनस्पति तेल प्रशोधन तथा उत्पादन गर्नेहरूको संघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थ माग बढेकाले मूल्य बढेको जानकारी दिएको छ।
हामीकहाँ खपत हुने तेलको कच्चा पदार्थका रूपमा सूर्यमुखी र भटमास प्रशोधन नगरिएको तेल ल्याइन्छ। वनस्पति तेलको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगले तोरी भने दाना नै ल्याउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै तेलको मुख्य स्रोत भटमास, सूर्यमुखी तथा तोरीको भाउ बढेको उद्योगी–व्यवसायीले स्पष्टीकरण दिएका छन्।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुसन्धानमा पनि कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
उद्योगीले विदेशी मुलुकमा निर्यात कम गरे यहाँ केही मूल्य घट्ने बताएका विभागले बताएको छ। वनस्पति घ्यू–तेल उत्पादक संघका अनुसार आयात लागत बढेकाले तेलको भाउ बढेको हो।
हामीकहाँ तेलका कन्टेनर हल्दिया बन्दरगाह, पश्चिम बंगालबाट आउँछ। भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले नेपालसम्म आइपुग्ने कार्गो लागत पनि बढेको संघको भनाइ छ।
संघका अनुसार प्याकेजिङ लगायत अन्य सहायक कच्चा पदार्थ सामग्रीको मूल्य वृद्धिले पनि तेलको भाउ बढाएको हो। कच्चा पदार्थको मूल्य उतैबाट बढेर आउँदा यहाँ आयात कर बापतको रकम बढ्छ। अप्रशोधित तेलमा दस प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। प्रतिलिटर चालीस रूपैयाँ कर पर्छ। यसले खाने तेलको उपभोक्ता मूल्य झन् आकासिएको संघको भनाइ छ।